Faa'iidooyinka Qubista Jikada Jiilaalka oo Jooji Muuradda
Bogga ugu weyn / Tilmaamaha qasabada / Faa'iidooyinka Qubista Jikada Jiilaalka oo Jooji Muuradda
2020 / 08 / 26 QoondayntaTilmaamaha qasabada 9712 0
Tuubbooyinka biyaha ee ugu caansan ee loo isticmaalo guryaha guud waa la hagaajiyaa. Si kastaba ha noqotee, saxanka biyaha ee guryaha badankood asal ahaan waa laba jeer saxanka, sidaa darteed waxay u baahan yihiin inay u wareegaan bidix iyo midig had iyo jeer, oo tartiib tartiib ayey u noqdaan kuwo furfuran oo daadanaya, taas oo gaabinaysa nolosha tuubbada.
Oo waxaa jira tuubbo soo-baxa oo xallin kara dhibaatadan.
Waxaa jira tuubbo birta oo aan xirneyn oo gudaha tubada bixisa. Haddii aad rabto inaad dib u-maydhiso ama aad u beddesho bidix iyo midig, kaliya tuubada biyaha ka soo jiid tubbada biyaha, si biyuhu aysan meel kasta ugu kala firdhin. Aad ugu habboon oo aad u saaxiibtinimo.
Tusaale ahaan, markaan maydho saxamada, waxaan u baahan nahay oo kaliya inaan dhaqaajino miisaska miiska ama saxamada, qasabadu uma baahna inay marwalba wareejiso. Iyo qaar ka soo bax tuubooyinka kitcehn leeyihiin shaqo cadaadis, oo biyaha keydiya marka loo eego tubooyinka caadiga ah. Intaa waxaa dheer, tubada noocan ah waxaa lagu nadiifin karaa 360 digrii iyada oo aan lahayn geesaha dhintay, taas oo gebi ahaanba xallineysa welwelka aan ka walwaleyno in qalabka miiska ama miraha iyo khudradda laga yaabo in aan lagu nadiifin karin geesaha dhintay.
Qashin-ka-soo-bixintan waxaa loo isticmaali karaa oo keliya jikada, laakiin sidoo kale musqusha iyo balakoonka. Ilaa iyo inta qurxinta guriga ay fiiro gaar ah leedahay, tubbo yar ayaa si weyn kor ugu qaadi karta tayada nolosha.
Farqiga u dhexeeya tubada caadiga ah iyo tubada bixida. Tubada soo bixida ayaa ku habboon in la isticmaalo, waxayna xallin kartaa dhibaatooyinka ay tubooyinka caadiga ahi aysan u wareegi karin oo ay leeyihiin geesaha dhinta inta lagu jiro nadiifinta. Qubeys yar ayaa sidoo kale si weyn kor ugu qaadi kara tayada nolosha.
Wadamada reer galbeedka ayaa caan ku ah isticmaalka qasabada soo bixida, tani badanaa waa sababta oo ah tubada soo bixida ayaa balaarin karta tirada nadaafadda, oo xor u ah isticmaalka. ogaada
Hadda, iyada oo shuruudaha dadku u leeyihiin tayada nolosha ay si tartiib tartiib ah u sii kordhayaan, qasabadaha la jiido ee telescopic-ka ayaa sii kordhaya.
Tuubada dib loo isticmaali karo waxaa loo isticmaalaa saxanka khudradda gebi ahaanba, waa mid aad ugu habboon dhaqidda qudaarta, waxaa loo isticmaali karaa in lagu mayro weelka. Waana loo adeegsan karaa meelaha weelka lagu maydho, waa wax ku habboon in la isticmaalo goorta timaha lagu maydho.
Si kastaba ha noqotee, tuubada tuubbooyinka telescopic-ka dib loo laabanayo way ka qaalisan tahay tubada caadiga ah, waxayna leedahay qaybo badan oo ka badan tubada caadiga ah. Hadday jabtay, ma fududa in la dayactiro.
Tubooyinka dib loo isticmaali karo waxaa guud ahaan loo isticmaalaa saxamada qudaarta. Way ku habboon tahay in la maydho khudradda. Waad iskaga maydh kartaa isla meeshaad rabto. Si kastaba ha noqotee, qiime wanaagsan ayaa ka qaalisan. . Guud ahaan, dhif iyo naadir looma adeegsado saqafka weelka. Haddii aad rabto inaad timahaaga u maydho si habboon, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho tuubbooyin dhererkoodu yahay 360 ° oo wareegsan. Tayada way fiicantahay sicirkuna waa raqiis yahay.
Hore:: Tayada Wadooyinka Qaar Ayaa Ubaahan In La Hagaajiyo Next: Maxay Yihiin Qaar Ka Mid Ah Talooyin Iyo Tabaha Looga Qaado Quful Faneed Naqshadda Musqusha?
2020 / 12 / 21 5264
2020 / 11 / 19 4597
2020 / 11 / 19 4197
2020 / 11 / 18 4473